I-Huawei isungula i-Huawei Y7 2019, i-smartphone yazo zonke iipokotho ezine-AI | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, Imiboniso
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba umenzi waseAsia uHuawei akabanga njani enye indlela ngaphakathi kuluhlu oluphezulu lwefoni, kodwa akulibaleli ibanga eliphakathi okanye igalelo. Ukuboniswa kweHuawei Y7 2019 kuyakuqinisekisa, ukuba nabani na unokuthandabuza.
IHuawei yenzelwe abantu abancinci abangafuniyo okanye abangakwaziyo ukuchitha imali eninzi yokuba ezinye iifowuni eziphakathi kuluhlu zibiza, kuba umtsalane wayo kuphela awukho kwixabiso lodwa, kodwa nakwi Ikhamera esemva encediswa bubukrelekrele bokusebenza ukuqhubekeka nokufumana iziphumo ezilungileyo.
IHuawei Y7 2019 isinika isikrini seDewdrop esingu-6,26-intshi sikhatshwa yi I-Qualcomm Snapdragon 450 8GHz 1.8-core, 3GB RAM, 32GB yangaphakathi yokugcinaIkhamera ngasemva enesentimitha eziyi-13 ngasemva enef / 1.8 ehamba neyesibini ye-2 mpx. Ukudityaniswa kweelensi zombini kusivumela ukuba sithathe iifoto apho zombini umxholo ophambili kunye nemvelaphi zahlulwe ngokugqibeleleyo. Konke oku kunokwenzeka usebenzisa iArtificial Intelligence.
Esi sizukulwana sitsha seY7, Isinika ukukhanya okungaphezulu ngama-50% xa kuthelekiswa nokungaphambili. Imowudi yasebusuku ithatha izithonga ezine ngokuchazwa okungafaniyo ukudibanisa ukufumana ezona ziphumo zibalaseleyo, inkqubo efanayo eyenzayo xa sisebenzisa imo ye-HDR, ukuphucula uluhlu olunamandla.
Inotshi ephezulu kwesikrini idibanisa ikhamera ye-8 mpx ngaphambili, Ukubonelela ngoyilo apho umphambili wonke usisikrini. Ngale khamera iphambili, uHuawei usinika inkqubo yokwamkelwa kobuso, inkqubo yokhuseleko ekhatshwa yintsimbi yeminwe ngasemva.
IHuawei Y7 2019 yiyo Inikwe amandla yiPie 9 ye-Android Ikhatshwa ngumaleko wokwenza ngokwezifiso i-Huawei EMUI, umaleko ekuhambeni kweminyaka ungaphantsi kwaye ungaphantsi, into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo bayithande abasebenzisi. Ibhetri yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwesi sigxina, kuba inesikhundla se-4.000 mAh.
Ixabiso kunye nokufumaneka kweHuawei Y7 2019
I-Huawei Y7 2019 iya kufika kwimarike ngo-Matshi 15 ukusuka 199 euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Imiboniso » I-Huawei isungula i-Huawei Y7 2019, i-smartphone yazo zonke iipokotho ezine-AI
Umboniso weAmazon Echo, uhlalutyo: Isithethi esikhulu kunye nescreen esikhulu esine-Alexa
Ungathenga igalelo leAmazon Echo ngesaphulelo se-15 se-euro